हास्यव्यंग्यकै गाईजात्रा !- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलको सामान्य मर्मतसम्भारकै लागि महोत्सव रद्द गर्नुपर्ने स्थिति आउनु ठूलो विडम्बना हो । हाम्रो बाली उठाउने बेला थियो अहिले । - मनोज गजुरेल
भाद्र १४, २०७५ सजना बराल
काठमाडौँ — गाईजात्रा । हास्यव्यंग्य कलाकारहरूका लागि दसैं बराबर । तर, यो महान् चाड सबै हास्य कलाकारले यस पालि मनाउन पाएनन् । भन्छन्— सधैँ महोत्सव गर्दै आएको ठाउँ पाइएन, अर्को खोज्नलाई समय घर्किसकेको थियो । यसलाई उनीहरूले गाईजात्राकै गाईजात्रा भएको रूपमा लिएका छन् ।
‘तयारी त थियो हाम्रो,’ कलाकार जितु नेपालले भने, ‘सधैँ महोत्सव गर्दै आएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन पुनर्निर्माण हुँदै छ । त्यो काम नसकिएकाले हाम्रो तयारी पनि त्यसै सेलायो ।’
जितु लगायतका कलाकारहरू स्थान अभावकै कारण महोत्सव गर्नबाट विमुख भए पनि अर्को टोली भने चुप बसेको छैन ।
सांस्कृतिक संस्थान (नाचघर) मा केही दिनयता ‘गाईजात्रा महोत्सव’ चलिरहेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महोत्सव गर्ने टोलीमा सहभागी हुँदै आएका प्यारोडी गायक टीका भण्डारी यस पालि नयाँ समूहसँग नाचघरमा सुनिइरहेका छन् । ‘एलेभेन्थ आवरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रम रद्द भएको खबर पाएपछि म नाचघरतिर आएँ,’ उनले भने, ‘गाईजात्रा कार्यक्रमकै गाईजात्रा भयो यस पालि !’
जितुले दुई दशकदेखि वर्षेनि प्रतिष्ठानमा गाईजात्रा प्रहसन गर्दै आएका थिए । यस पालि पहिलो पटक गाईजात्रा नगर्दा उनलाई खल्लो लागेको छ । ‘राष्ट्रिय सभागृह महँगो भयो, आर्मी अफिसर्स क्बलमा १२/१५ दिनसम्म कार्यक्रम गर्न सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘नाचघर प्याक्ड भइसकेको थियो । वानेश्वरको हल (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) मा अर्कै गाईजात्रा चलिरहेको छ । हामी त घरका न घाटका भयौं †प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम नहुँदा गाईजात्रा प्रहसनको परम्परा भत्कियो ।’
प्रत्येक गाईजात्रामा विशेष प्रस्तुति दिँदै आएका स्टयान्डअप कमेडियन मनोज गजुरेल यसपालि स्कुल/कलेजमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलको सामान्य मर्मतसम्भार हुँदा नै कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने स्थिति आउनुलाई उनले ठूलो विडम्बना मानेका छन् । ‘हाम्रो बाली उठाउने बेला थियो अहिले,’ उनले रुन्चे हाँसोमा भने, ‘अब देश/विदेशका कार्यक्रम र महोत्सवबाट पूर्ति गर्नुपर्ला ।’
गजुरेलले गाईजात्रालाई हास्यव्यंग्यको वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्ने अवसर ठान्ने गरेका रहेछन् । त्यो प्रतिवेदन यसपालि नयाँ माध्यमबाट दर्शकसामु पेस गर्नुपरेको बताए । ‘नियमित कार्यक्रम गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘अब वर्षभरिको रिपोर्ट निकालेर हामी अरू कार्यक्रममा पेस गर्नेछौं ।’ उनी तिहारमा हुने सिस्नोपानी देउसीमा दर्शकलाई सरप्राइज्ड दिने सोचमा छन् ।
गाईजात्राका दिन रेडियो अडियोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थुप्रै हास्य कलाकार प्रस्तुत भएका थिए । तिनले करवृद्धि, फोहोरमैला लगायत विषयमा व्यंग्य गरे । यता, नाचघरमा जारी महोत्सवमा पनि यी विषयसँगै ट्राफिक जाम, अपरहण र बलात्कारजस्ता सामाजिक समस्यालाई समेटिएको छ ।
हल अभावलाई कारण देखाए पनि खासमा फिल्मी गतिविधिका कारण गाईजात्रा नगरिएको भन्ने हल्ला छ । हास्य कलाकारहरू फिल्मतिर लागेकाले स्टेज कार्यक्रमलाई वास्ता नगरेको भनिन्छ । केहीले त दसैंमा प्रदर्शन हुन लागेको ‘छक्का पञ्जा ३’ लाई प्रभाव पर्ने भएकाले पनि ‘तिते–जिरे मेरी बास्सै गाईजात्रा महोत्सव’ नगरिएको बताएका छन् ।
‘छक्का पञ्जा’ शृंखलाकी निर्देशक दीपाश्री निरौला भने यस्ता हल्लालाई वाहियात मान्छिन् । ‘गाईजात्रा नहुनु हाम्रा लागि घाटैघाटा छ,’ उनले भनिन्, ‘फिल्मको प्रचारप्रसार गर्न पाइएन । कतिपय कलाकारले यसबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो पनि रोकियो । स्टेजमा प्रस्तुति दिने अवसर गुम्यो ।’ भृकुटीमण्डपमा डोम (स्टेज) बनाएर कार्यक्रम गर्नेबारे सोचे पनि झरीका कारण अप्ठयारो पर्ने देखेर चुप बसेको उनको भनाइ थियो ।
‘सुरुमा त एकेडेमीले गाईजात्रासम्म हल तयार हुन्छ भनेको थियो,’ दीपाले भनिन्, ‘तर, बीचमा आएर पुनर्निर्माण सकिने/नसकिनेमा द्विविधा भयो । अन्तिममा आएर नहुने नै भएपछि हामीसँग नगर्नुको विकल्प रहेन ।’ विगतमा हप्ता–पन्ध्र दिनसम्म गाईजात्रा महोत्सवमा व्यस्त हुँदै आएकी उनी यसपालि अमेरिकामा हुने फिल्म अवार्डका लागि बिहीबार देश छोडदै छिन् । ‘अब अर्को साल डबल हँसाइन्छ,’ उनले भनिन् ।
बहाना मुलुकी संहिता
हालै लागू नयाँ मुलुकी संहिता (ऐन) ले हास्यव्यंग्य (क्यारिकेचर) क्षेत्रलाई अंकुश लगाएको कतिपय कलाकारको भनाइ छ । पञ्चायत र राणाकालमा समेत गाईजात्रा महोत्सवमा व्यंग्य गर्न छुट भए पनि अहिले त्योभन्दा कडा अवस्था आएको जितुले बताए । ‘बरु, त्यो बेला हामीलाई मुलुकी ऐन लाग्दैन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार व्यंग्य पचाउन नसक्ने खालको भयो ।’
मनोज भने व्यंग्यको नाममा अराजकता मच्चाउन नहुने तर्क गर्छन् । तर, आफूहरू सेल्फ एडिटेड अर्थात् स्वसम्पादित हुने कुरालाई पनि भुल्न नहुने बताउँछन् । ‘नयाँ ऐनले हामीलाई प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको छैन,’ मनोजले भने, ‘तर, सत्तावालाको व्यक्तिगत इगोमा ठेस पुग्यो भने तिनले यही कानुनमाथि टेकेर हामीलाई कस्न सक्ने ठाउँचाहिँ छ ।’
नयाँ कानुन कै कारण पो गाईजात्रा प्रहसन नगरिएको हो कि भन्नेहरू पनि एकातिर छन् ।
शैली फेर्ने बेला
पछिल्ला वर्षका गाईजात्रा महोत्सव विवादित बन्दै आएका थिए । द्विअर्थी संवाद र भद्दा प्रस्तुतिको आलोचना गर्ने गरिएको थियो । यही कारण दर्शक संख्या घट्न थालेपछि गाईजात्राको आकर्षण खुइलिँदै गएको बताइन्छ । तर, दुई दशकदेखि गाईजात्रामा प्यारोडी गाउँदै आएका टीका पोहोरको महोत्सव भव्य भएको सम्झन्छन् । ‘यसपालि एकेडेमीमा कार्यक्रम नहुँदा कतिपय दर्शकले खल्लो मान्नुभएको छ,’ उनले भने ।
मनोज चाहिँ अबको हास्यव्यंग्यमा ठाडो गाली र आक्रोश मेटाउन आवश्यक रहेको ठान्छन् । सभ्य र शिष्ट व्यंग्य मीठो हुने उनको बुझाइ छ । ‘मैले ओलीको व्यंग्य गर्दा उहाँले मनन गर्न सक्नुहोस्,’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यंग्य शैलीलाई पुनर्ताजगी गर्ने बेला आएको छ । एउटा फम्र्याटको आयु एक दशक हो । अब फम्र्याट फेर्नुपर्छ । हामीले आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।’
२०५०/५१ देखि प्रतिष्ठानमा नियमित गाईजात्रा महोत्सव हुँदै आएकामा यसपालि थिति तोडिएको मनोजको भनाइ छ । ‘हाइड्रोसाइड्रोमा लगानी गर्ने ठूला संघसंस्थाले काठमाडौंमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हल बनाइदिए हुने,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा राष्ट्रलाई योगदान पनि हुने थियो ।’
तत्कालीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै गाईजात्रा मञ्चबाट सन्तोष पन्त, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यदेखि किरण केसी, राजाराम पौडेल, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, दमन रुपाखेती, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, सबिता गुरुङ, शिवहरि पौडेलसम्मका कलाकार उदाएका हुन् । यीसँगै प्यारोडी गायनमा टीका भण्डारी, यमन श्रेष्ठ अनि स्टयान्डअप कमेडीमा मनोज गजुरेल, हास्य कवितामा शैलेन्द्र सिम्खडाहरू पछिल्लो समय चर्चित थिए ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:५८
काठमाडौँ — सुरुवाती नाम ‘रोजी’ फेरेर ‘रोज’ बनेको र भदौ २२ मा रिलिज हुन लागेको फिल्मले सुटिङ अवधिदेखि नै झमेला बेहोर्नुपर्‍यो । प्रेमिका हत्याका आरोपी प्रेमीको सत्यकथा भनिएकोले र नामका कारण पनि यस्तै प्रकृतिको रोजी महर्जन हत्याकाण्ड र उनका परिवार यसबारे सचेत भए ।
‘रोज’ का दुई नायिका मिरुना मगर (बायाँ) र पारामिता राणासँग नायक प्रदीप खड्का ।
रोजीका अभिभावकले फिल्मको नाम र ‘सत्य घटनामा आधारित’ वाक्यांशमा आपत्ति जनाएपछि सुटिङ अवरुद्ध भयो । यति बेला फिल्मकी मुख्य पात्र नाम पनि ‘रोजिना’ को ठाउँमा ‘रोज’ राखेपछि साविक मितिमा रिलिज हुने भएको छ ।
प्रेमिका हत्यारा अभिजंग थापाको भूमिकामा देखिएका अभिनेता प्रदीप खड्का भने अझै पनि फिल्मको कथा र रोजी हत्याकाण्डबीच कुनै समानता नरहेको दाबी गर्छन् । बुधबार फिल्मबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘रोजी हत्याकाण्डसँग फिल्म मेल खाँदैन । समानता केही छ भने प्रेमीद्वारा प्रेमिकाको हत्या भन्ने मात्रै छ ।’ उनले फिल्मको कन्सेप्ट सुन्दै पृथक लागेपछि अभिनय गर्न खोजेजस्तो चरित्र पाएको ठानेका रहेछन् ।
‘लभस्टोरी जानराका दर्शकका लागि सायद रुचिकर नलाग्न पनि सक्ला । तर कहिलेकाहीं कलाकारले यस्ता चुनौतीपूर्ण भूमिकामा पनि देखिनुपर्छ । अरूलाई यसले अभिनय पनि गर्न सक्छ भन्ने लागोस्,’ प्रदीपले थपे, ‘दर्शकले मबाट हेर्न चाहिरहेको लभस्टोरी फिल्म नै हो भने पनि मेरा एक/दुई गल्ती माफ गरिदिनुहुन्छ होला भनेर मैले यो जोखिम मोलेको हुँ । मलाई यसको ओपनिङ, इन्टरभल र क्लाइमेक्स तीन चिज मन परेको हो । फिल्मको स्क्रिप्टले त जे पनि बनाउन सकिन्छ तर यी तीन चिज सोचेभन्दा भिन्न लागे ।’
निरक पौडेल निर्देशित ‘रोज’ केदार भुसालले लेखेका हुन् भने प्रदीपसहित मिरुना मगर र पारामिता राज्यलक्ष्मी राणाको मुख्य अभिनय रहेको छ । ‘लालपुर्जा’ डेब्यु गर्ल मिरुनाले यसमा वकिलको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । अभिजंगका पक्षमा वकालत गरेकी मिरुनाले कानुनी भाषा र लवजमा संवाद बोल्नुपर्दा नौलो लागेको सुनाइन् । ‘खासगरी म सानो स्वरमा बोल्छु । तर वकिलले बहसमा चिच्याएर बोल्नुपर्ने रहेछ । शब्द पनि बोलीचालीको भन्दा फरक,’ उनले यसअघि यस्तो बहस नदेखेको उल्लेख गदै भनिन्, ‘यूके बस्दा म प्राय: अंग्रेजी बोल्ने गर्थें । तर मलाई जटिल शब्द सिक्न मनचाहिँ पथ्र्यो । फाइदै भयो ।’ त्यसो त उनलाई सुरुमा न्यायाधीशलाई श्रीमान्भन्दा पनि अप्ठयारो लागेको रहेछ ।
पारामिता भने रोजको भूमिकामा छिन् ।
प्रदीपले फिल्म मल्टिन्यारेसनमा रहेको जानकारी दिँदै हत्याकाण्डबारे साक्षी पात्रका आआफ्ना प्वाइन्ट अफ भ्युबाट कथा अघि बढ्ने बताए । ‘एआईजीको छोरा अभिजंग, एकदम सोझो र साधारण केटो, जसले कमिला मार्न पनि सक्दैन, त्यसले कसरी मान्छे मार्ने हिम्मत जुटायो ? अथवा, किन त्यो निर्णयमा पुग्यो ? फिल्मको मुख्य थिम नै यही हो,’ प्रदीपले अदालतमा अभिजंग हत्यारा हो वा होइन भन्नेमा बहस, पैरवी भइरहे पनि दर्शकमा भने अभिजंगले किन र कसरी प्रेमिकालाई मार्‍यो भन्नेमा उत्सुकता रहने दाबी गरे । थपे, ‘यो एउटा चरित्रको मनोविज्ञान हो । के कति परिस्थितिले उक्त केटा त्यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने हो । ध्यान दिएर फिल्म हेर्नेका लागि ‘रोज’ मन पर्छ ।’
प्रदीपले फिल्ममा ३२ टेकसम्म दिएको सुनाए । ‘अदालतमा मलाई आजीवन कारावास सजाय सुनाउँदाखेरी मेरो पीडा देखाउने सट दिने क्रममा धेरै टेक खाएँ,’ निर्देशक अनुपस्थित रहेको कार्यक्रममा प्रदीपले भने, ‘निर्देशकले लाउड भयो भनेपछि घटाउँदा घटाउँदै ठिंगै न्युट्रल भई उभिएको छु । मेरो हिसाबले त त्यो एक्टिङ नै हैन । तर निर्देशकको हिसाबले त्यो भयंकर एक्टिङ भयो । अब दर्शकले त्यसलाई कुन हिसाबले मूल्यांकन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो ।’
त्यसो त उनले निर्देशकलाई सन्तुष्ट बनाउन आफूले जे पनि गर्न तयार हुने पनि बताए । फिल्ममा धोखा पाएको प्रेमीको भूमिका निर्वाह गरेका प्रदीप वास्तविक जीवनमा भने प्रेमसम्बन्धलाई सिरियसली नलिने बताउँछन् । ‘म विकल्पसहित चल्छु । धोका दिएको छैन, पाएको छु । प्लस टु पढ्दाताका मेरो गर्लफ्रेन्ड थिइन् । ६ महिनाजति प्रेम चलेपछिको भ्यालेन्टाइन्स डेमा गिफ्ट दिन जानुअघि अर्कैले बाइकमा फिल्मी स्टाइलमा उडाइदियो,’ ब्रेकअपको त्यो पहिलो तनाव बेहोरेका ‘प्रेमगीत’ स्टारले भने, ‘मसँग पनि बाइक भइदिएको भए छोडेर जाँदैनथिन् कि जस्तो लाग्यो । त्यसपछि बाइक पनि किनें । तर पछि त्यस्तो प्रेम सम्बन्ध भएन । अरु साथीभाइका ट्राजेडी देखेर पनि यो चिज गर्न हुने हैन जस्तो लाग्यो ।’
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:५७